किन कम फारम फाँट ड्राइभ रूपान्तरणहरू | Martech Zone
हाम्रो शानदार प्रविधि प्रायोजक,फार्मस्ट्याक , मा धेरै अनुसन्धान गरेको छ फारम प्रयोग गरेर अधिक रूपान्तरण उत्पन्न गर्दै। हामीले सब भन्दा राम्रो अनुसन्धान कम्पाईल गर्ने क्रममा काम गरेका छौं कम फारम फाँट ड्राइभ रूपान्तरण। वास्तवमा, हामीले पत्ता लगायौं कि अधिकतम रूपान्तरण दरहरू तब हुन्छ जब प्रयोगकर्ताले भर्नुपर्ने फिल्डहरूको संख्या दुई वा तीन हो।
इन्फोग्राफिकले तपाइँको कसरी सुधार गर्ने बारे केही सुझावहरू प्रदान गर्दछ रूपान्तरण ड्राइव गर्न फारम डिजाइन। के तपाईंको फारामहरू सबै उपकरणहरूमा अनुकूलित छन्? के फन्ट पर्याप्त छ? यी प्रश्नहरू हुन् जुन तपाईंले आफैलाई सोध्नु पर्दछ जब तपाईं एक प्रभावी फारम सिर्जना गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ।
तिम्रो के बिचार छ? के तपाईसँग संघर्ष गर्नुहुन्छ कति फार्म क्षेत्रहरू तपाईसँग हुनु पर्छ?
टैग: रूपान्तरणरूपान्तरण अनुकूलनफारम क्षेत्रहरूफारामफारमस्ट्याकक्षेत्रहरूको संख्या
राम्रो इन्फोग्राफी, के तपाइँ B2C वेबसाइटहरू तुलना B2B वेबसाइटहरु मा फरक छन् भने थाहा छ ?. मेरो मतलब B2B प्रयोगकर्ताहरू फारमहरू भर्न बढी प्रवण छन्?
यसमा प्रदान गरिएको डाटाले प्रायः B2B वेबसाइटहरूसँग डील गर्दछ। जहाँसम्म, जब हामी B2B बनाम B2C बाट डाटा खोज्दै थियौं, त्यहाँ ईकमर्सको मामला बाहेक, परिणाममा एक टनको भिन्नता थिएन। यदि त्यहाँ प्रयोगकर्तालाई उनीहरूको जानकारी प्रदान गर्न र खाता सिर्जना गर्नुको सट्टा पाहुनाको रूपमा साइन इन गर्न विकल्प छ भने, तिनीहरू निश्चित रूपमा यसको सट्टा पाहुनाको रूपमा साइन इन गर्न सक्दछन्। मलाई लाग्छ, फारमस्ट्याक र एक प्रयोगकर्ताको रूपमा मेरो अनुभवहरूमा आधारित छ कि यो व्यावहारिक धारणा हो कि B2B प्रयोगकर्ताहरू फारमहरू भर्न बढी प्रवण छन् भनेर सोच्न।
व्याख्याको लागि धन्यबाद